.ကြောကျကပျအတှကျ ထာဝရ အကောငျးဆုံး ဆေးတခှကျ (ကွိုတငျကာကှယျခွငျးက အကောငျးဆုံးပါ). – Askstyle
.ကြောကျကပျအတှကျ ထာဝရ အကောငျးဆုံး ဆေးတခှကျ (ကွိုတငျကာကှယျခွငျးက အကောငျးဆုံးပါ).
ဖနျခှကျထဲကို အုနျးစိမျးရညျထညျ့၊ ပွီးရငျကြောကျဖရုံယို တဈတောငျ့ ထညျ့စိမျထားလိုကျ၊ တဈနာရီကြျောလောကျ စိမျထားရငျရပွီ၊ အရညျလညျးသောကျ အဖတျလညျးစား၊ အဲဒါဟာ ကြောကျကပျအတှကျ ထာဝရဆေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကြောကျကပျအမွဲတနျးကောငျးခငျြရငျ တဈပတျတဈခါလောကျသောကျပေး။ ကြောကျကပျမကောငျးတော့ဘူးဆိုရငျလညျး စိတျမပကျြပါနဲ့၊ အခုပွောတဲ့ ကြောကျကပျအတှကျ ထာဝရဆေးကို တဈပတျ ၃ ကွိမျစားပေးနိုငျပါတယျ။
ကြောကျကပျဟာ အသကျ ၄၀ ကြျော ပွီဆိုရငျ အိုဟောငျးသှားတော့တာ ပါပဲ။ ကြောကျကပျအလုပျလုပျမှုဟာ အသကျ ၄၀ ပွညျ့တဲ့နှဈ ကစလို့ ၁ နှဈကို ၁ ရာခိုငျနှုနျး ကဆြငျးသှားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အသကျကွီးလာတာနဲ့ အမြှ ကြောကျကပျလညျး အားနညျး လာတော့တယျ။
သို့သျောလညျး သူ့ကို သခြောထိနျးသိမျး စောငျ့ရှောကျတတျရငျတော့ အကောငျးအတိုငျးရှိနပွေီး လုပျဆောငျခကျြတှေ မကဆြငျးနိုငျဘူး။ ကြောကျကပျအတှကျ မွဈခငျြးပွီး သဘာဝဆေးဟာ ကြောကျဖရုံသီးဖွဈကွောငျး အရငျအပတျက ပွောခဲ့ပွီးဖွဈတယျ။
ကြောကျဖရုံသီးကို ကမ်ဘာပျေါမှာ အကောငျးဆုံးရေ ဖွဈတဲ့ အုနျးစိမျးရညျထဲ ထညျ့စိမျလိုကျတဲ့အခါမှာတော့ ကြောကျကပျအတှကျ ကမ်ဘာပျေါမှာ အကောငျးဆုံးဆေး ဖွဈသှားတော့တာပါပဲ။
ယ်ခုအခါမှာ ကြောကျကပျနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ရောဂါတှေ အမြားကွီးဖွဈနကွေပါတယျ။ ကြောကျကပျရောငျခွငျး၊ ကြောကျကပျကြောကျတညျခွငျး၊ ကြောကျကပျအားနညျးခွငျး၊ လုပျဆောငျခကျြ ကဆြငျးခွငျး၊ ဆီးအမွှုပျမြားခွငျး၊ ဆီးဆိပျမြားခွငျး၊၊ ကြောကျကပျပကျြစီးခွငျး၊ ကြောကျကပျကငျဆာစသညျဖွငျ့ အမြိုးမြိုးဖွဈနကွေတာ တှရေ့ပါတယျ။
ကြောကျကပျရောဂါ ဖွဈတဲ့သူတှေ ကွညျ့လိုကျရငျ မိနျးမထကျယောကျကြားက ပိုမြားတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ယောကျကြားမှာ ဆီး၊ မိနျးမမှာမီးတဲ့။ ယောကျကြားတှေ ဆီးမကောငျးရငျ ကြောကျကပျရောဂါ ဖွဈလှယျတယျ။ ယောကျကြားတှကေ ပလေညျးပကွေတာကိုး။ ဒါကွောငျ့လညျးယောကျကြားတှအေသကျ တိုကွတာဖွဈတယျ။
အသကျကွီးသညျအထိ ကြောကျကပျကောငျးကွတဲ့ သူတှကေို ကွညျ့ရငျ သူတို့ဟာ အစားအသောကျကို သငျ့ရုံလောကျပဲစားကွတဲ့ သူတှေ ဖွဈတယျဆိုတာ တှရေ့လိမျ့မယျ။ ကြောကျကပျဟာ စားသမြှ အစားအသောကျတှထေဲက ပါလာတဲ့ အညဈအကွေး အဆိပျအတောကျတှကေို သနျ့စငျပေးပွီး ဆီးလမျးကွောငျးကနေ စှနျ့ထုတျပေးရတဲ့ အင်ျဂါ ဖွဈပါတယျ။
သငျ့ရုံသာ စားရငျ ကြောကျကပျက အလုပျနညျးနညျးပဲ အလုပျလုပျရလို့ မပငျပနျးဘဲ ကွာရှညျခံမယျ။ အစားကွူးရငျတော့ ကြောကျကပျက ပငျပငျပနျးပနျး အလုပျလုပျရလို့ ကွာရှညျမခံနိုငျဘူး။ အဲဒါအရေးကွီးဆုံး အခကျြပဲ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီအပွငျ အခွားသော ဆောငျရနျရှောငျရနျတှလေညျး ရှိပါသေးတယျ။ ဘာတှလေညျးဆိုရငျ
ထုံးဓာတျမြားတဲ့ရကေိုရှောငျခွငျး -အကျစဈဓာတျမြားတဲ့အစားအသောကျကိုလြှော့စားခွငျး – အယျကာလီမြားတဲ့အစားအသောကျကိုပိုစားခွငျး -အသီးအရှကျမစားတဲ့အကငျြ့ကိုပွုပွငျခွငျး -အနီရောငျအသားကိုသငျ့ရုံသာစားခွငျး -အသားထကျအဆီကနကေယျလိုရီပိုရယူခွငျး -ဝမျးမခြုပျအောငျလကေ့ငျြ့ခွငျး – ခြှေးထှကျအောငျပွုလုပျပေးခွငျး -သှားနှငျ့ခံတှငျးကိုအမွဲသနျ့ရှငျးနစေခွေငျး
-ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုမြားစခွေငျး -ည၁၀နာရီအိပျယာဝငျခွငျး -အရကျသစောမူးယဈဆေးဝါးရှောငျရှားခွငျး -အနားယူပေးခွငျး -သငျ့ရုံသာစားသောကျခွငျး -အစာကိုကွညေကျအောငျဝါးစားခွငျး ဓာတုဆေးဝါးမြားကိုလိုအပျမှသောကျခွငျး -ကှမျးယာ၊ဆေးလိပျသုံးစှဲမှုမမြားစခွေငျး -ဆိုဒီယမျပါသောအစာမြားလြှော့စားခွငျး -ပနျးရောငျကြောကျဆားသုံးခွငျး -သှေးတိုးစာမြားလြှော့စားခွငျး -မနကျစောစောစာကိုပွညျ့စုံစှာစားခွငျး -ရသေောကျမနညျးစခွေငျး -နရေောငျခွညျခံပေးခွငျးတှပေဲဖွဈပါတယျ။
အဲဒီလို ဆောငျရနျရှောငျရနျတှကေို သိထားပွီး ကြောကျကပျအတှကျ ထာဝရဆေးကိုလညျး ပုံမှနျစားပေးသှားမယျ ဆိုရငျတော့ ကိုယျ့ကြောကျကပျအတှကျ စိတျပူစရာ မရှိနိုငျလောကျတော့ဘူးပေါ့။ ကြောကျကပျဆေးနရေတဲ့ သူတှလေညျးရှီးပတီးပေါငျးစားခွငျးနဲ့ အတူ အခုပေးတဲ့ဆေးကို သောကျနိုငျစားနိုငျကွပါတယျ။
ကြောကျကပျအတှကျဆေးကို ဘယျအခြိနျမှာ စားရမလဲတဲ့။ အသငျ့တျောဆုံး အခြိနျကတော့ ကြောကျကပျအဆိပျထုတျခြိနျဖွဈတဲ့ ညနေ ၃ နာရီကနေ ၅ နာရီမတိုငျမီ နလေ့ညျ ၂ နာရီ လောကျပါပဲ။ ပွီးရငျ ရမြေားမြားသောကျပေးပါ။ ကြောကျကပျက အနညျအနှဈတှေ အားလုံးဆီးလမျးကွောငျးကနေ ထှကျသှားပါလိမျ့မယျ။ ညနေ ၅ နာရီကနေ ၇ နာရီက ဆီးအိမျအဆိပျထုတျခြိနျဖွဈတဲ့အတှကျ အဲဒီအခြိနျတှေ အထိ ဆီးကောငျးကောငျးသှားပေးနဖေို့လညျး လိုပါတယျ။
ကြောကျကပျရောဂါတှဟော ဖွဈလာရငျ သိပျကိုစိတျညဈရတတျတယျ။ ပိုကျဆံတှေ အမြားကွီးကုနျပွီး လူဖွဈလညျးရှုံးတတျတယျ။ ဒါကွောငျ့ မိမိကြောကျကပျကို သဘာဝနညျးနဲ့ စောငျ့ရှောကျပါလို့ နညျးကောငျးလေးတဈခု မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။ မိတျဆှမြေား အားလုံးကြောကျကပျရောဂါတှကေနေ ကငျးဝေးပွီး ကိုယျစိတျနှဈပါး ခမျြးမွကွေ့ပါစေ။
ဖန်ခွက်ထဲကို အုန်းစိမ်းရည်ထည့်၊ ပြီးရင်ကျောက်ဖရုံယို တစ်တောင့် ထည့်စိမ်ထားလိုက်၊ တစ်နာရီကျော်လောက် စိမ်ထားရင်ရပြီ၊ အရည်လည်းသောက် အဖတ်လည်းစား၊ အဲဒါဟာ ကျောက်ကပ်အတွက် ထာဝရဆေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်အမြဲတန်းကောင်းချင်ရင် တစ်ပတ်တစ်ခါလောက်သောက်ပေး။ ကျောက်ကပ်မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်လည်း စိတ်မပျက်ပါနဲ့၊ အခုပြောတဲ့ ကျောက်ကပ်အတွက် ထာဝရဆေးကို တစ်ပတ် ၃ ကြိမ်စားပေးနိုင်ပါတယ်။
ကျောက်ကပ်ဟာ အသက် ၄၀ ကျော် ပြီဆိုရင် အိုဟောင်းသွားတော့တာ ပါပဲ။ ကျောက်ကပ်အလုပ်လုပ်မှုဟာ အသက် ၄၀ ပြည့်တဲ့နှစ် ကစလို့ ၁ နှစ်ကို ၁ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသက်ကြီးလာတာနဲ့ အမျှ ကျောက်ကပ်လည်း အားနည်း လာတော့တယ်။
သို့သော်လည်း သူ့ကို သေချာထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်တတ်ရင်တော့ အကောင်းအတိုင်းရှိနေပြီး လုပ်ဆောင်ချက်တွေ မကျဆင်းနိုင်ဘူး။ ကျောက်ကပ်အတွက် မြစ်ချင်းပြီး သဘာဝဆေးဟာ ကျောက်ဖရုံသီးဖြစ်ကြောင်း အရင်အပတ်က ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။
ကျောက်ဖရုံသီးကို ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးရေ ဖြစ်တဲ့ အုန်းစိမ်းရည်ထဲ ထည့်စိမ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကျောက်ကပ်အတွက် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးဆေး ဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ။
ယ္ခုအခါမှာ ကျောက်ကပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါတွေ အများကြီးဖြစ်နေကြပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်အားနည်းခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ချက် ကျဆင်းခြင်း၊ ဆီးအမြှုပ်များခြင်း၊ ဆီးဆိပ်များခြင်း၊၊ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ကင်ဆာစသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
ကျောက်ကပ်ရောဂါ ဖြစ်တဲ့သူတွေ ကြည့်လိုက်ရင် မိန်းမထက်ယောက်ကျားက ပိုများတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ယောက်ကျားမှာ ဆီး၊ မိန်းမမှာမီးတဲ့။ ယောက်ကျားတွေ ဆီးမကောင်းရင် ကျောက်ကပ်ရောဂါ ဖြစ်လွယ်တယ်။ ယောက်ကျားတွေက ပေလည်းပေကြတာကိုး။ ဒါကြောင့်လည်းယောက်ကျားတွေအသက် တိုကြတာဖြစ်တယ်။
အသက်ကြီးသည်အထိ ကျောက်ကပ်ကောင်းကြတဲ့ သူတွေကို ကြည့်ရင် သူတို့ဟာ အစားအသောက်ကို သင့်ရုံလောက်ပဲစားကြတဲ့ သူတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ တွေ့ရလိမ့်မယ်။ ကျောက်ကပ်ဟာ စားသမျှ အစားအသောက်တွေထဲက ပါလာတဲ့ အညစ်အကြေး အဆိပ်အတောက်တွေကို သန့်စင်ပေးပြီး ဆီးလမ်းကြောင်းကနေ စွန့်ထုတ်ပေးရတဲ့ အင်္ဂါ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရုံသာ စားရင် ကျောက်ကပ်က အလုပ်နည်းနည်းပဲ အလုပ်လုပ်ရလို့ မပင်ပန်းဘဲ ကြာရှည်ခံမယ်။ အစားကြူးရင်တော့ ကျောက်ကပ်က ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ်လုပ်ရလို့ ကြာရှည်မခံနိုင်ဘူး။ အဲဒါအရေးကြီးဆုံး အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအပြင် အခြားသော ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဘာတွေလည်းဆိုရင်
ထုံးဓာတ်များတဲ့ရေကိုရှောင်ခြင်း -အက်စစ်ဓာတ်များတဲ့အစားအသောက်ကိုလျှော့စားခြင်း – အယ်ကာလီများတဲ့အစားအသောက်ကိုပိုစားခြင်း -အသီးအရွက်မစားတဲ့အကျင့်ကိုပြုပြင်ခြင်း -အနီရောင်အသားကိုသင့်ရုံသာစားခြင်း -အသားထက်အဆီကနေကယ်လိုရီပိုရယူခြင်း -ဝမ်းမချုပ်အောင်လေ့ကျင့်ခြင်း – ချွေးထွက်အောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်း -သွားနှင့်ခံတွင်းကိုအမြဲသန့်ရှင်းနေစေခြင်း
-ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများစေခြင်း -ည၁၀နာရီအိပ်ယာဝင်ခြင်း -အရက်သေစာမူးယစ်ဆေးဝါးရှောင်ရှားခြင်း -အနားယူပေးခြင်း -သင့်ရုံသာစားသောက်ခြင်း -အစာကိုကြေညက်အောင်ဝါးစားခြင်း ဓာတုဆေးဝါးများကိုလိုအပ်မှသောက်ခြင်း -ကွမ်းယာ၊ဆေးလိပ်သုံးစွဲမှုမများစေခြင်း -ဆိုဒီယမ်ပါသောအစာများလျှော့စားခြင်း -ပန်းရောင်ကျောက်ဆားသုံးခြင်း -သွေးတိုးစာများလျှော့စားခြင်း -မနက်စောစောစာကိုပြည့်စုံစွာစားခြင်း -ရေသောက်မနည်းစေခြင်း -နေရောင်ခြည်ခံပေးခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကို သိထားပြီး ကျောက်ကပ်အတွက် ထာဝရဆေးကိုလည်း ပုံမှန်စားပေးသွားမယ် ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကျောက်ကပ်အတွက် စိတ်ပူစရာ မရှိနိုင်လောက်တော့ဘူးပေါ့။ ကျောက်ကပ်ဆေးနေရတဲ့ သူတွေလည်းရှီးပတီးပေါင်းစားခြင်းနဲ့ အတူ အခုပေးတဲ့ဆေးကို သောက်နိုင်စားနိုင်ကြပါတယ်။
ကျောက်ကပ်အတွက်ဆေးကို ဘယ်အချိန်မှာ စားရမလဲတဲ့။ အသင့်တော်ဆုံး အချိန်ကတော့ ကျောက်ကပ်အဆိပ်ထုတ်ချိန်ဖြစ်တဲ့ ညနေ ၃ နာရီကနေ ၅ နာရီမတိုင်မီ နေ့လည် ၂ နာရီ လောက်ပါပဲ။ ပြီးရင် ရေများများသောက်ပေးပါ။ ကျောက်ကပ်က အနည်အနှစ်တွေ အားလုံးဆီးလမ်းကြောင်းကနေ ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ညနေ ၅ နာရီကနေ ၇ နာရီက ဆီးအိမ်အဆိပ်ထုတ်ချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီအချိန်တွေ အထိ ဆီးကောင်းကောင်းသွားပေးနေဖို့လည်း လိုပါတယ်။
ကျောက်ကပ်ရောဂါတွေဟာ ဖြစ်လာရင် သိပ်ကိုစိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးကုန်ပြီး လူဖြစ်လည်းရှုံးတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် မိမိကျောက်ကပ်ကို သဘာဝနည်းနဲ့ စောင့်ရှောက်ပါလို့ နည်းကောင်းလေးတစ်ခု မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေများ အားလုံးကျောက်ကပ်ရောဂါတွေကနေ ကင်းဝေးပြီး ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။